Ogaden News Agency (ONA) – Sharciga Itobiya- Qiro inaad dambiile tahay hadii kale xabsiga dhex fadhi
Sharciga Itobiya- Qiro inaad dambiile tahay hadii kale xabsiga dhex fadhi
Posted by ONA Admin	/ January 11, 2012
Labadii saxafi ee dalka Sweden u dhashay, sida xaqdarada ahna loogu xukumay 11ka sano ayay dad xog-ogaal ahi kula taliyeen in aanay rafcaan ka qaadanin xukunkaa hadday doonayaan in la sii daayo. Waxaa loo sheegay nidaamka maxkamadaha Itobiya ee xukuumadda Wayaanaha waa inuu qofka isaga is-xidho oo dambiga isku qiro ka dibna ka codsado Meles Zinawi cafis iyo naxariis.
Ninka la xidhiidha saxafiyiinta Anna Roxvall ayaa u sheegay saxiifadda Dagens Nyheter (DN), in go’aanka lagula taliyay Martin Schibbye iyo Johan Persson uu ahaa mid sax ah markaan si walba u fiirinay, sababtoo ah haday rafcaan ka qaataan waxba iskama badalyo xukunka, oo qaanuunka Itobiya ayaa ah inuu qofka isku qiro dambi uusan galin si loo cafiyo. Labada saxafi ayaa weedhan kooban warqad ku soo qoray; “Waxaan ku kalsoonahay dhaqanka Itobiya ee ku dhisan cafiska iyo naxariista.”
Sharci ahaan waa inuu Madaxweynaha dalka fidiyaa cafiska, hasa ahaatee Meles umbaa cafin kara ama xidhi kara dadka jooga Itobiya.
Ururka saxafiyiinta Sweden ayaa ku adkaysanaya in Persson iyo Schibbye yihiin laba nin oo saxafiyiin ah oo hawl saxaafadeed un u tagay Ogadenya, waxayna ku tilmaameen xadhiga labada saxafi inay guuldaro u tahay madaxbanaanida saxaafadda. Sidaa waxaa yidhi ninka madaxda ka ah ururka saxafiyiintaSwedenMr. Jonas Nordling.
Karin Schibbye oo ah saxafiga hooyadii oo CNN wareysi siisay ayaa tidhi; “Xabsiga ay ku jiraan wuxuu u qaybsan yahay (Zones), iyadoo qaybwalba ay ku jiraan 1000 maxbuus. Zone-walba waxaa ka dhisan buulal ay ku jiraan 150 ilaa 250 maxbuus buulkii walba, halkaasoo habeenkii lagu soo oodo. 100 sariir oo kali ah ayaa buul walba dhex taala sidaa darteed in badan ayaa dhulka jiifta.” Wuxuu ii sheegay bay tidhi Martin in dadka meesha ku xidhan ay aad u fara badan yihiin oo sibidhka la’is barbar jiifo. Waxay tidhi; “Hadda Schibbye and Persson waxay noqdeen asyaano, marka waxaa la siiyay hal sariir oy ku wada seexdaan, teendho yar gacantooda ayay ku tusheen oo qolqol ahaan ah. laakiinse nalka marna lagama damiyo buulka, waana qaylo joogta ah habeenkii. Taasaa ugu daran.”
Waxaa kaloo ay sheegtay inay jadwal samaysteen, markay wax cunayaan iyo markay jimicsanayaan, si caafimaadkooda ay u ilaaliyaan. Waxay u sheegtay inay lacag u diyaariyeen looga gado makhaayadaha cunto, oo isla markaa ay u geeyeen raashin qalalan oy ku karsadaan gudaha. Buugaag ayaan u gaynay ayay tidhi hooyada Martin, iyadoo ka codsatay qofkii ku tabarucaya buug inuu us oo diro si maktabada ay samaysteen ugu darsadaan.
dalka Sweden ayaa guud ahaan ka cadhaysan sida fuusha xun ee loola dhaqmay labadaa saxafi, iyadoo saxaafadda dalakssi ay aad wax uga qoraan arimaha la xidhiidha xabsigooda iyo asbaabaha ay ugu socdeen Ogadenya. Waxaana la faliyaa todobaadka soo socda inay ku hordhigaan banaabax baarlamaanka dalka hortiisa.
Waxaa hubaal ah inay labadan saxafi waxyaaba badan ka soo arkeen xabsiyada Itobiya iyo habka maxkamadaha Itobiya dadka loogu bahdalo, arimahaasoo ay wax ka qori doonaan markay ka soo baxaan xabsiga. Wixii ka soo kordha waan la socon doonaa.